"Nziyo dzehupenyu netariro" hupombwe hwaRubén Darío | Zvazvino Zvinyorwa
Izvo Ruben Dario zvainyatso kujeka paakataura nezve rake basa "Nziyo dzeHupenyu uye Tariro." Paakabvunzwa nezvake, akataura zvinotevera: << «Bhuruu» inomiririra kutanga kwechitubu changu uye «Profane prose»Chitubu changu chizere; "Nziyo dzehupenyu netariro dzine zvinhu zvine hungwaru zvematsutso angu." Hatina kukwanisa kutanga chinyorwa ichi nekutsanangura zviri mukati mebasa nenzira iri nani pane kutora mazwi emunyori wawo.
Uye ndezvekuti kubva pakutanga kwebasa iwe unoona kukura kwekudetemba kwaDarío, uyo mundima yake yekutanga anoti "Ndini uya angotaura nezuro ..." yaanotaura nezvevanyori vake, yake kubata kwemanyoro uye matauriro ake akura kuti ape chimiro kune iro basa rinotinetsa nhasi, umo pfungwa yakashanduka yemunyori anoshamisa weNicaragua inoonekwawo, uyo kwemakore anga achiumba mazano ake.
Chirevo mune ino seti yenhetembo ndechekuti zvakanyanya kudhakwaiyo isingadzikise kubwinya kwedikisiki rayo, iro rinoenderera mberi nekusimbisa hukuru hwepfungwa, hunyanzvi hwehunyanzvi uye kuzvidza kwese kusiri kwakadzika uye kwakakwirira, ndiko kuti, kunozvisunungura mhando yekurwira kupokana , iyo kune nyanduri rudzi rwekudzikisira munhu.
Mune ino nhanho nyowani, Darío anosarudza kusiya yake «Ivory tower»Uye sekutaura kwaanongoita mune imwe yendima dzake, anoziva kuti ndiye nyanduri wevashoma vakasarudzika uye kuti kunyangwe hazvo vanhu vazhinji vasiri vateereri vake, anonzwa kuti anofanira kuve nehukama hwepedyo navo kuzadzisa yake yemagariro basa. Ndokusaka nyaya dzezvematongerwo enyika dzichioneka zvakanyanya mumapeji ebhuku rino nekuti kwaari chinenge chisungo chekudzora manzwiro uye zvinodiwa nevanhu pachavo.
Mamwe mashoko - Prosas Profanas, iyo itsva naRubén Darío
Mufananidzo - Zvese Unganidzo
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » "Nziyo dzehupenyu netariro", rechitatu basa rakakura naRubén Darío
Gladys Lopez Malespin. akadaro
Ini ndiri muNicaragua kubva kumusha kwekunyora kwedu mudetembi Ruben Dario.Ndinokukorokotedzai nekuda kwezvienzanidzo izvi maererano nemabasa matatu akakosha akachinja Modernism. Ini ndinoda kureruka uye runako sezvavanozviisa. Mumwe anonzwa sekuenderera mberi nekuverenga.
Pindura Gladys Lopez Malespin.
Karina Rizo Juarez akadaro
Chinangwai chinonzi ruben dario mune dzake nziyo dzehupenyu uye tariro chii chiri basa rake?
Pindura kuna Karina Rizo Juarez
Dingindira re "Nziyo dzehupenyu netariro"